Hot-alim-bolo vita amin'ny alim-bary vita amin'ny alim-borona ho an'ny hazo fihinambolana O - H112 Temper - Zhejiang Shuanglin Jiate Teknolojia Teknolojia co., Ltd
Fanamarihana: Azo takarina amin'ny fangatahanao manokana ny fepetra takiana amin'ny famolavolana, ny fifehezana na ny fepetra. Raha manana fepetra na fanontaniana ianao, mifandraisa aminay.
firaka Min. Al Si Fe Cu Mn Mg Zn V Ti Other
firaka TEMPER (mm) Hateviny (MG) DIAMATRA (mm) Malagasy
Fampiharana ny aliminioma:
Amin'ny maha-mpamatsy lehibe ny Aluminium Circle, dia vita avy amin'ny alimine madio ary ampiasaina amin'ny cookware sy engineering, toy ny mahandro sakafo, tanjona mazava, cooker, frypan, tavoahangy, ketla, reflexoron'ny hazavana, sns. Azo atao ny manome alim-bika tsara tarehy Alodia. Ny faritr'Analamanga Aluminium dia mampiasa fonosana voaaro tsara. Ny faribolantsika dia fitaovana tena tsara ho an'ny famokarana fitaovam-pihinanana, fitaovana, vilany, kitay sy kesika.
FAHARI-KEVITRA NY FITIAVANA
tezitra Hateviny (MG) Tanjaka mahery Elongation (%) Standard
Aluminium circle s ho an'ny stick stick:
1) ny tapa-damba rehetra misy miora amin'ny rano, izany dia afaka miaro ny entana amin'ny lozam-pifamoivoizana an-dranomasina.
2) hazo palettes na kitay hazo.
3) Hotafinay ny orinasam-pifandraisana tsara indrindra sy ny orinasan-tsambo ho an'ny mpanjifanay, hanome anareo ny vidin'ny freight sea tsara mba hampitahana.
4) Haka sary isika rehefa mavesatra isaky ny mandeha.
Fepetra takiana minitra: 5 ton
Fitaovana: 100ton / herinandro
Fandefasana fotoana: 15-30 andro
Packaging Details: Export trondro hazo tranainy
Fihetsiketsehana: ao anaty kitapo hazo na trondro misy kitapo
3003 h14 kofehy aliminioma, kodiarana Aluminium ho an'ny pans, kodiarana alim-borona